FANAFIHANA MITAM-BASY : Raim-pianakaviana loakan’ny bala teo amin’ny lohany
Nirefotra indray mandeha ny basy. Avy hatrany dia teo amin’ny lohan’ilay raim-pianakaviana tompon’omby sendra nitsirika teo am-baravarana no niantefan’ny bala. 14 avril 2017
Nandriaka ny ra. Nisehoana fanafihan-dahalo tao Ambolomborona, eo an-tampon-tanànan’Ambatofinandrahana ny alarobia teo tokony ho tamin’ny 3 ora maraina.
Andian-dahalo nisy efa ho 20 lahy niaraka tamin’ny basim-borona no nitontona teo an-tanàna ary avy hatrany dia namantana tao amina tokantrano iray. Nidiran-dry zalahy an-keriny ny valan’omby ary navoakany niaraka tamin’izay ny omby miisa 19. Teo indrindra no nivoaka ny trano tampoka ilay rangahy tompon-trano raha nahare ny kotaba tany ivelany. Vao nivoaka ny varavarana anefa ny tenany tonga dia notsenain’ny tifitra ka maty tsy tra-drano.
Io feom-basy io no nanaitra ny fokonolona iray tanàna saingy tsy nisy sahy nivoaka trano ny rehetra noho ny tahotra sy ny hamaroan’isan’ireo olon-dratsy. Tokony ho 10 minitra taorian’ny fanafihana vao nampandrenesina ny Zandary, raikitra ny fanarahan-dia taorian’izay. Ireo Zandary mpanao fisafoana amin’ny alina no nanenjika an’ireo malaso avy hatrany niaraka tamin’ny vatan-dehilahy matanjaka tao an-toerana.
Nisy ny fifandonana teny an-dalana ka vaky nandositra ihany niafaran’ireo dahalo rehefa resy tosika, iray tamin’izy ireo no naratra mafy voatiditra saingy mbola tafatsoaka niaraka tamin’ny namany.
Tafaverina amin’ny tompony avokoa ny omby rehetra.